IFTIINKACUSUB.COM: Somalidu Qoraalka dheer maxay ayay u neceb tahay ?
Somalidu Qoraalka dheer maxay ayay u neceb tahay ?
Soomalidu inta badan ma xiiseeyaan in ay wax akhriyaan isla markaana ay wakhti ku filan ay siiyaan hadba Buuga ama qoraalka markaasi ay jecel yihiin in ay akhriyaan.
Dadka wax qoraana had iyo jeer midkastaaba itaalkiisa waxa uu ku dadaalaa in uu qoraalka uu qoraayo uu ka fikiro in ay bulshadu xiisayso ama akhrisato iyada oo aanay ku dhibtoon
Waa mid'subxanalle in qoraal aad maskaxdaada iyo wakhtigaaga ku bixisay uu noqdo mid bulshada dhibaato gaadhsiiya wakhtigoodii qaaliga ahaana aad kaga qaado inkaarana ay ka dhacaan.
In qoraalkaaga wax laga sheegaa, ama dadka qaar u qushuuci waayaan qoraalkaagu meesha uu ku jahaysan yahay,ujeedada uu xanbaarsan yahayna loo arko mid daraf iyo cid lagu duraayo,taasi oo ay keenayso dabeecadaha iyo fikradaha kala duwan ee aynu leenahay,iyada oo ay reeban tahay cayda iyo aflagadadu.
Hadaba dadka iyagu isku taxalujiya in ay wax qoraan khaasatan qoralada aadka u dhadheer ,waxaay la kulmaan had iyo jeer in akhris tayaasha sharafta lihi ay ka codsadaan in ay qoraladaasi aadka u dhaadheer ay soo gaabiyaan ama ay ka dhigaan kuwi maalinba qayb gaar ah ay soosaraan ,si aanay markaasi ugu daalin akhriskooda.
Hadaba arinta meesha ku jirta ee u baahan in aynu isla fahamno ayaa waxa ay tahay, Dunidan aynu ku nool nahay dadka iyagu wax qoraa waxa ay ku talagalaan in qoraladoodu ay maalinba maraaxil kala gadisan ay maraan, iyaga oo markaasi ka faloonaaya ama wax ka qoraaya wakhti tegay mid jooga iyo xilli markaaso soo socda oo aan la gaadhin.
Qoraladaasi kala duwan ee uu qoraagu qorayaa waxa ay kusoo bixi karaan in ay noqdaan kuwo dhaadheer ,qaar dhex dhexaad ah iyo kuwo aad u gaagaaban.
Qoraalkastaana waxa uu u baahan yahay in xaqiisa oo dhamays tiran la siiyo si ay markaasi akhristayaasha aanu ugu badh-go'in una fahman,waana mida keenaysay mararka qaar in qoraalku dheeraado isaga oo xigmadiisa wata.
Qoraal kasta oo dheer qoraaga wakhti dheer ayaa kaga luma,waxaa dhici karta in mararka qaar ayaamo badan uu ka qaato qoristiisa oo kaliyii.
Hadiiba qofkii wax qoray uu wakhti ku filan qoraalkii siinaayo si uu adiga kuugu soo gudbiyo kuuna fahamsiiyo ujeedada qoraalka, akhriste adigu maxaad qoraalkii dheeraa aad wakhti aad qaybsato u siin wayday ee aad qoraaga ugu xujaynaysaa in uu qoraalka soo gaabiyo??
Hadii Buug aad akhriyayso ma dhici kartaa in qoraagii Buuga qoray aad tidhaahdo Buuga soo gaabi? oo mee halkuu jooga ma nool yahay ma dhintay !!! Qoraalkasta oo dheer waxa aan kugula talinayaa hadii aad doonayso in aad fahamto waxa aad samaysaa:
1. Marka u horaysa ee aad aragto in qoraalku dheer yahay ha niyad jabin markiiba,sida dadka qaar ku dhacda,waayo qoraalku maaha Biyo la qudh-qudhiinaayo iyagaaba miyir loo cabaa.
2.Wakhtiga akhriska haysku badan si aadan u daalin kadibna aadan qoraalka uga niyad jabin taasi oo keenu karta in qoraal oo dhanba aad ka xanaaqdo.
3.Jacaylka faraha badan ee kuu haya in qoraalkasi aad daqiiqad ku dhamaysaa, waxa uu kuu keeni karaa dhaawac dhinaca fahmada ah.
4.Xilliga ama wakhtiga aad rabto in aad wax akhridaa waa in uu yahay mid aad firaaqo fiican u haysato wax ku mashquliyaana aanay jirin.
5. Qoraalkasta oo dheer wakhtisii maalinba wax yar akhriso ilayn kaa dhamaan maayo adigoo dhameeya mooyaane.
6.Qoraalada kuugu xiisaha badan kusoo noqnoqo markasta waxa ay kusiinayaan faham ka gadisan kii aad hore uga haysatay,shaaha iyo qaxwuhuna aktaada ha yalaan.
7.Dhaliil kasta oo buuga ,maqaalka,rayiga iyo sheekooyinka kaaga muuqda adiga rayigaaga cidna ha ku caayin,hadaad su'aal ka qabtana u gudbi Qoragii xaqiisa lahaa si ixtiraam iyo sharafi ku jirto.
W/Q: Khadar Ibrahim Aaar